Logitech G27 ihamba nje ihamba yokujika
umbuzo Logitech G27 ihamba nje ihamba yokujika
iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 10 eyadlulayo #496 by JanneAir15
Molo! Ngaba kunokwenzeka ukuba ukusebenzisa Logitech G27 ihamba njengoko ihamba yokujika. Mna kakade ukuba yenziwa njani kodwa kwakhona ndingathanda ukubuza apha. Ngoko ke ukuba ngaba uyazi ukuba indlela zisebenze nceda sixelele apha.
Akukho mfuneko yokuba aphendule kwakhona! Ndiye ndenza isigqibo sam. Ndiza kuthenga ze desktop yakho, esinezinyathelo kunye umcephe wokunyusa. Oku inzima kakhulu kwaye ndaqonda ukuba bathenge ezi zinto esengqiqweni bayakuzisebenzisa.
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we-10 inyanga edlulileyo JanneAir15.